म किन प्याच्च बोलिरहन्छु? | युवाहरू सोध्छन्‌
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काबुभरदियानु काम्बा किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किर्गिज किलुबा कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्यामा क्षोसा गा गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली डच डेनिश तामिल तारास्कान तेलगु तोजोलबल त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पिजिन (पश्चिम अफिका) पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज मङ्गोलियन मले मल्यालम माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन वारे-वारे वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
“अक्सर म जिब्रोलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छु तर कहिलेकाहीँ भने के बोल्छु-बोल्छु, होसै हुँदैन।”—जेम्स।
“नर्भस भएको बेला म सोच्दै नसोची बोलिरहेको हुन्छु अनि नर्भस नभएको बेलामा चाहिँ फतरफतर बोलिरहेको हुन्छु। मलाई त बोल्नै आउँदैन।”—मारी।
बाइबलले बताएअनुसार “जिब्रो . . . आगै हो” अनि “बडेमानको जङ्‌गलमा डढेलो लगाउन आगोको सानो झिल्का मात्र भए पुग्छ।” (याकुब ३:५, ६) के तपाईँको बोलीले गर्दा तपाईँ अक्सर समस्यामा पर्नुहुन्छ? पर्नुहुन्छ भने, यो लेख तपाईँको लागि मदतकारी छ।
म किन प्याच्च बोल्छु?
जिब्रोलाई कसरी लगाम कस्ने?
त्रुटिपूर्ण: बाइबल यसो भन्छ: “हामी सबै जना धेरै चोटि चुक्छौँ। यदि कोही आफ्नो वचनमा चुक्दैन भने ऊ आफ्नो सारा शरीरमा लगाम कस्न सक्ने सर्वगुणी मानिस हुन्छ।” (याकुब ३:२) हामी हिंड्‌ने बेलामा मात्र होइन बोल्ने बेलामा पनि ठेस खान्छौँ।
“मेरो दिमाग र जिब्रो दुवै त्रुटिपूर्ण छ। त्यसैले आफ्नो बोलीलाई पूरा नियन्त्रणमा राख्न सक्छु भन्‍नु आफूलाई झुक्याउनु मात्र हो।”—एना।
धेरै बोल्ने बानी। बाइबल यसो भन्छ: “मानिसले जति धेरै बोल्छ, उति नै धेरै गल्ती गर्छ।” (हितोपदेश १०:१९) आफू मात्र धेरै बोल्ने तर अरूको कुरा भने त्यति सुन्‍न नरुचाउने मानिसहरूले अक्सर अरूलाई झोँक चलाउने बोली बोल्ने सम्भावना हुन्छ।
“सधैँ बाठो-टाठो मानिसहरू नै बोल्नुपर्छ भन्‍ने छैन। पृथ्वीमा येसुजस्तो बुद्धिमान्‌ अरू कोही छैन तैपनि उहाँ कहिलेकाहीँ शान्त बस्नुहुन्थ्यो।”—जुलिया।
व्यङग्य हान्‍नु। बाइबल यसो भन्छ: “सोचविचार नगरी बोल्दा त्यसले तरबारले झैँ घोच्छ।” (हितोपदेश १२:१८) सोचविचार नगरी बोलिने बोलीको एउटा उदाहरण हो व्यङ्‌ग्य हान्‍नु, जुन अर्कालाई होच्याउन बोलिने घोच्ने बोली हो। व्यङ्‌ग्य हान्‍ने व्यक्‍तिले भन्ला, “मैले त ठट्टा मात्र पो गरेको नि!” तर कसैलाई हेपेर बोल्नु सानो कुरा होइन। बाइबलले हामीलाई “दुर्वचनका साथै हानि गर्ने सबै कुरा” त्याग भनेर बताउँछ।—एफिसी ४:३१.
“म कुरा गर्न खप्पिस छु अनि मलाई रमाइलो गर्न पनि मन पर्छ। मेरो यस्तो बानीले गर्दा अनजानमै व्यङ्‌ग्य हानिरहेको छु, जसले गर्दा म अक्सर फसाद्‌मा पर्छु।”—ओक्साना।
मन्जनलाई ट्युबभित्र फेरि छिराउन सम्भव नभएजस्तै एकचोटि बोलिसकेपछि त्यो फिर्ता लिन सकिँदैन
जिब्रोलाई काबूमा राख्न त्यति सजिलो छैन तर तपाईँलाई बाइबलको सिद्धान्तले मदत गर्छ। तलका उदाहरणहरू विचार गर्नुहोस्‌,
“मनमनै गुन र चुपचाप बस”—भजन ४:४.
कहिलेकाहीँ एक छटाकको जिब्रो फट्‌कार्नुभन्दा एक धार्नीको टाउको हल्लाउनु बेस। लाओरा नाम गरेकी युवती यसो भन्छिन्‌ “शान्त भएको बेला मनमै नभएको कुरा पनि रिसको झोँकमा मुखसम्मै आइसकेको हुन्छ। त्यस्तो बेला आफूलाई भन्‍न मन लागेको कुराहरू नभनेकोमा प्रायः मलाई खुसी लाग्छ।” केही सेकेन्ड चुप लाग्दा पनि हामी गलत कुराहरू बोल्नदेखि जोगिन्छौं।
“जसरी जिब्रोले खानेकुरा चाख्छ, त्यसैगरि कानले पनि सुनेको कुरा जाँच्दैन र?”—अय्युब १२:११.
कुनै कुरा बोल्नुअघि यी प्रश्‍नहरू आफैलाई सोध्नुभयो भने तपाईँ पछि पछुताउनु पर्दैन:
म जे भन्दै छु, के त्यो सत्य हो? के त्यसो भन्‍नु दयालु कुरा हो? के यो मैले भन्‍नै पर्ने कुरा हो?—रोमी १४:१९.
त्यही कुरा मलाई अरूले भन्यो भने मलाई कस्तो लाग्छ?—मत्ति ७:१२.
के मैले अर्को व्यक्‍तिको धारणालाई आदर गरिरहेको हुन्छु?—रोमी १२:१०.
के यो कुरा भन्‍ने उपयुक्‍त समय वा अवस्था यही हो?—उपदेशक ३:७.
“नम्र भएर अरूलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान”—फिलिप्पी २:३.
यस सल्लाहले तपाईँलाई अरूप्रति सकारात्मक सोचाइ राख्न मदत गर्छ। अनि यसरी सोच्यौं भने आफ्नो जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्न अनि बोल्नुअघि एक पटक विचार गर्न तपाईँलाई मदत गर्छ। तर तपाईँले चित्त दुख्ने कुरा बोलिसक्नुभयो भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्‌, नम्र छौं भने हामी क्षमा माग्न अग्रसर हुन्छौँ। अनि हामीले जति छिटो क्षमा माग्यौँ, उति बेस। (मत्ति ५:२३, २४) त्यसपछि अर्को पटक बोल्ने बेला आफ्नो जिब्रोलाई लगाम कस्ने अठोट गर्नुहोस्‌।
“गफको तालमा म यति मस्त हुन्छु कि के-के बोल्छु-बोल्छु। तर मेरो कुराले अरूलाई कस्तो असर गर्ला वा फाइदा-बेफाइदा के होला भनेर १० सेकेन्ड मात्र सोच्दा पनि मैले आफ्नो जिब्रोलाई वशमा राख्न सकेको छु।”—टेलर।
“कसैले तपाईँको चित्त दुख्ने कुरा बोल्यो भने तुरुन्तै रिसाइहाल्नुभन्दा पहिला परिस्थितिलाई विचार गर्नुहोस्‌। अक्सर त्यस्तो कुरा आवेशमा आएर बोलिएको हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ भने अरूले बोलेको कुरा चित्त दुख्ने खालको भए पनि त्यसमा केही हदसम्म सत्य कुरा लुकेको हुन सक्छ। सकारात्मक अनि शान्त भई कुराकानी गर्दा समस्या ठूलो हुन पाउँदैन।”—ब्रान्डन।
“नकारात्मक कुरा दिमागमा खेलाएनौँ भने अरूको चित दुखाउने कुरा बोल्नेछैनौँ। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो सोचाइ बदल्नुपर्ने हुन्छ अनि अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ। यसो गऱ्‍यौँ भने अरूको चित दुख्ने बोली बोल्ने विचार मनमा तुरुन्तै आइहाल्ने छैन।”—जेसिका।
नाम मात्रका साथीहरू धेरै भेटिन्छन्‌ तर तपाईं साँचो साथी कसरी भेट्टाउन सक्नुहुन्छ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने म किन प्याच्च बोलिरहन्छु?